Ingabe unezinduna emhlane wakho? Funda ukuziqeda | Amadoda aSitayela
Siphila esikhathini lapho imizimba yethu ibaluleke kakhulu kuningi labantu futhi okumele ibe nayo izinduna ngemuva akekho oyithandayo. Isikhathi esithile manje, abantu abaningi baya ejimini ngezaba zokuzivocavoca umzimba okuncane, kodwa ekugcineni bagcina benza izivivinyo zokwakha umzimba ukuze bakwazi ukumaka imisipha yezingalo futhi ikakhulukazi ibha yoshokholethi edumile wonke umuntu ayithanda kakhulu. abesifazane.
Ukushiya eceleni ukubukeka komzimba, abanye abantu bangahlushwa yizinduna esikhunjeni, hhayi kuphela emhlane, kodwa nakwezinye izingxenye zomzimba, ikakhulukazi ehlobo, kuthinta inhlalakahle yengqondo yomuntu obahluphekayo, ukugwema ngaso sonke isikhathi ukukhumula izingubo ezimboza izindawo ezethula izinduna, kungaba emuva, amankonyane, isidunu
1 Izimbangela zezinduna ngemuva
1.1 Ukuntuleka kwenhlanzeko
1.2 Ukujuluka okweqile
1.3 Ukungabikho komoya endaweni
1.4 Izinkinga zehomoni
1.5 Ukungezwani komzimba
1.6 Isikhumba esinamafutha
1.7 Ukusetshenziswa kokhilimu noma izimonyo
1.8 Ukusetshenziswa kojosaka, izikhwama, izikhwama ...
1.9 Ukugqoka izingubo ezikubambayo
2 Kungani izinduna emhlane wami?
3 Izinkinga zesibindi emuva
4 Ungaziphatha kanjani izinduna emhlane
4.1 Ukungathathi hlangothi ph gel
4.2 Faka umoya endaweni ethintekile
4.3 Izindwangu zikakotini
4.4 Phuza uketshezi oluningi
4.5 Gqoka izingubo ezihlanzekile
5 Amathiphu okwelapha nokuvimbela izinduna ekuqhubekeni ngemuva
5.1 Gwema ukusebenzisa okhilimu noma ama-lotion ezindaweni ezithintekile
5.2 Khipha indawo ethintekile
5.4 Shawa ngamanzi ashisayo
Izimbangela zezinduna ngemuva
Ezimweni eziningi, ukuvela kwezinduna kungenxa yokushoda kwenhlanzeko. Lapho ihlobo lenzeka kufanele sibheke ukuthi kungenzeka yini geza kabili ngosuku, emini eyodwa nasebusuku, ukuhlanza indawo ethintwe yizinduna.
Ngezinye izikhathi kungahle kube ngenxa yokujuluka okweqile kulezo zindawo. Ingemuva ingenye yezindawo zomzimba lapho umjuluko uhlala uvela kuqala, kanye nasemakhwapheni. Asikwazi ukuzibamba sijuluke njengo kuyindlela yokuvikela umzimba wethu, kepha uma sikwazi ukusebenzisa izingubo ukuze sijuluke kancane.
Funda ngamasu wasekhaya ukugwema ukujuluka ngaphansi kwekhwapha
Ukungabikho komoya endaweni
Kungenzeka futhi ukuthi kungenxa yokuntuleka komoya owanele endaweni ngenxa yokusetshenziswa kwe- izingubo ezenziwe ngezinto zokwenziwa. Bonke labo abathintekayo yilolu hlobo lwenkinga, okokuqala nje isilinganiso okufanele bakwenze ukuqala ukusebenzisa izindwangu ezenziwe ngokotini, okuvumela umjuluko wendawo ethintekile.
Kepha futhi kungenxa yezinkinga zehomoni, kungaba kungenxa yemithi ethile esiyiphuzayo noma ngenxa yezinguquko ezikhona zenzeka emzimbeni wethu.
Kwezinye izikhathi, inani elikhulu lezinduna lingavela ngokuzumayo ngemuva okungenzeka kungenxa yohlobo oluthile lwe izidakamizwa ezinobuthi noma ukudla esikuthathile. Lolu hlobo lokuphendula luhlala izinsuku ezimbalwa futhi aluhlali ngesikhathi.
Abantu abanesikhumba esinamafutha noma abaphethwe yi-seborrhea ngokuningi abahlaselwe yizinduna ezindaweni ezahlukene zomzimba. Yize wonke umuntu angathanda ukuba nesisindo sethu esifanele, ezikhathini eziningi akunakwenzeka, nezinduna ngemuva kungaba omunye wemiphumela yokukhuluphala ngokweqile.
Ukusetshenziswa kokhilimu noma izimonyo
Ngokufanelekile, sebenzisa njalo ama-gel ane-pH engathathi hlangothi futhi uvikele lezo eziqukethe okuqukethwe okunamafutha amaningi okungavimba ama-pores futhi kubangele ukuvuvukala okudala izinduna.
Ukusetshenziswa kojosaka, izikhwama, izikhwama ...
Njengokusetshenziswa kwezingubo ezenziwe ngezinto ezincane noma ezingaphefumuleki, ukusetshenziswa kojosaka kuvimbela emuva kwethu kungaba nomoya owanele. Uma sisebenzisa lolu hlobo lwezesekeli kaningi, kungenzeka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kuzovela izinduna.
Ukugqoka izingubo ezikubambayo
Izingubo ezenziwe nge izindwangu ezingaphefumulekisy eduze nomzimba njengezigqoko zomsebenzi, kuvimbela ukujuluka okujwayelekile kwendawo yomzimba okuyo.
Kungani izinduna emhlane wami?
Izimbangela eziningi ezidala izinduna ezingxenyeni ezihlukene zomzimba, ikakhulukazi ngemuva kubangele ukwanda kwezindlala ezibusayo, okwandisa ukukhiqizwa kwe-sebum, okubangela ukuqedwa kwamangqamuzana e-epithelial afile kanye nokwanda kwamagciwane ngaphakathi komgudu wokukhipha lapho ama-pores abe khona, aqongelela i-sebum, amabhaktheriya namaseli afile.
Behluleka ukuthola indlela yokuphuma, lezo zinduna ezimhlophe, ezijwayelekile zomqubuko kanye namakhanda amnyama abizwa nangokuthi ama-comedones, ziyavela. Kwesinye isikhathi, uma singabantu abanezinwele eziningi emhlane wethu, kungenzeka ukuthi ngesikhathi kuzalwa abanye babo, akubonanga ukukhanya futhi kwaqhubeka nokukhula ngaphakathi, ekugcineni kubangele induna. Lezi zinhlamvu zihlukile kunalezo ezidalwa ukunqwabelana kwe-sebum futhi okuwukuphela kwekhambi lokuzigwema ukwenza ukwelashwa okukhipha amafutha endaweni njalo.
Kuya ngomuntu ophethwe yizinduna emhlane, owesilisa, owesifazane noma ingane, i- Izimbangela zokuvela kwalolu hlobo lwezinduna kungaba ngenxa yezimbangela ezahlukene. Isibonelo, ezinganeni ezincane, into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi zivela ekujulukeni ngokweqile, ngoba zifudumele kakhulu lapho imvelo ishisa kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, izimbangela ezishukumisa ukubonakala kwabesilisa nabesifazane zingaba ngenxa yezimbangela ezihluke kakhulu.
Izinkinga zesibindi emuva
Inkinga enkulu abantu abahlushwa yizinduna ezibhekene nayo kungenzeka kuphawula ukuthi okusanhlamvu kungashiya uma sekomile. Uma sisehlobo, kufanele sigweme konke ukuxhumana nelanga lapho kusemahoreni amakhulu kakhulu emisebe yelanga, ngakho-ke uma sifuna ukujabulela ilanga, kuzofanele sibenzele into yokuqala ekuseni noma ntambama , lapho imisebe yelanga incipha kakhulu.
Lezi zimaki kanye nokuba khona kwezinduna kungathinta ubudlelwane bezenhlalo babantu ababaphethe kabi, usebenzisa izingubo ezimboza yonke indawo ethintekile Ngenkinga elandelayo yokuthi ukuthintana ngengozi noma ukungqubuzana kungadala ukuqhuma kwezinye zalezi zinhlamvu ezingcolise ihembe, kwesinye isikhathi okuphoqa ukusebenzisa enye ingubo ezingubeni, nokushisa okwedlulele nokungenisa umoya endaweni. esikwenzayo ukwenza inkinga yezinduna ngemuva ibe yimbi kakhulu.
Ungaziphatha kanjani izinduna emhlane
Ukungathathi hlangothi ph gel
Isinyathelo sokuqala okufanele sisisebenzise ukwelapha izinduna ngemuva ukuqala ukusebenzisa i- ijeli engathathi hlangothi noma elwa namagciwane, ukuze inganikeli ekwandeni kwezinduna futhi ezovumela ukuthi indawo ethintekile ihlanzwe.
Faka umoya endaweni ethintekile
Kunconywa ngangokunokwenzeka ukugcina indawo ethintekile okusha ngangokunokwenzekaUma nje sinethuba lokwenza ngaphandle kwehembe, sizokwenza njalo.
Sebenzisa izindwangu eyenziwe ngokotini, okuvumela ukujuluka kwendawo ethintekile.
Gwema ukudla okunamafutha amaningi futhi ezigcina uketshezi, ukubeka phambili izithelo nemifino ngaphezu kokuphuza uketshezi oluningi, okungcono amanzi.
Gqoka izingubo ezihlanzekile
Ngaso sonke isikhathi lapho sifika ekhaya futhi lapho kungenzeka khona, kufanele sishintshe ihembe noma isikibha esisisebenzisayo ukuvimbela umjuluko ekuqhubekeni nokuxhumana nezinduna ezisemhlane.
Amathiphu okwelapha nokuvimbela izinduna ekuqhubekeni ngemuva
Awukho umkhiqizo oyisimangaliso ovumela iqembu elithile labasebenzisi ukuthi libalandele izinduna zivela ngemuva, kepha ngokulandela izeluleko ezilandelayo, singakunciphisa kakhulu ukubukeka kwazo.
Gwema ukusebenzisa okhilimu noma ama-lotion ezindaweni ezithintekile
Ngale ndlela sizokugwema lokho okusanhlamvu okungakelapheki, bangatheleleka futhi babambezele ukuvalwa kwabo.
Khipha indawo ethintekile
Okungenani kathathu ngesonto kufanele faka iglavu noma isipanji esikhipha amanzi lokho kusivumela ukuthi sisuse amangqamuzana afile ezindaweni ezithintekile. Ngendlela, sizovimbela izimbotshana ojuluka ngazo zingaminyaniswa.
Izipanji zemifino zikulungele ukugcina indawo yangemuva ethintekile yizinduna ihlanzekile. Lezi zinhlobo zezipanji zilungile kusukela lapho khuthaza ukusakazeka ngaphezu kokuqeda amaseli afile, yehlukile eziponji zendabuko ukuthi izipanji zemifino zikhuthaza ukusakazeka ngokwemvelo.
Shawa ngamanzi ashisayo
Ngokusebenzisa amanzi ashisayo ukugeza sikuthanda lokho ama-pores ethu avuleka ngokwemvelo nokuthi zihlanzekile ekungcoleni.
Ekubonakaleni kokuqala kwezinduna ngemuva noma enye ingxenye yomzimba, into yokuqala okufanele uyenze iya kudokotela wesikhumba ukufunda isikhumba sethu futhi usinike ukwelashwa okufanele ngokwesimo sethu. Ezimweni eziningi, udokotela wesikhumba uzosinikeza umhlahlandlela omncane ngamathiphu okufanele siwasebenzise ukuzama ukuwaqeda futhi sizame ukugwema ukuvela okusha.
Eziningi zalezi zeluleko yizo esixoxe ngazo kule ndatshana. Isincomo sokuya kudokotela wesikhumba ukukwazi khipha umthetho wokuthi izinduna ezivele ngemuva, ingahle ihlobane nanoma yini enye ngaphandle kwalezo esizivezile ngenhla.
Udokotela wesikhumba uzokwenza izivivinyo ezidingekayo ukuthola imvelaphi nesizathu sezinduna, usinikeza ukwelashwa ngokulandelana, uze ugcine uhlangabezana nenkinga edala izinduna. Kumele kukhunjulwe ukuthi njengoba kunezici ezahlukahlukene ezingazibangela, akunakwenzeka ukwazi ukuthi imvelaphi iyini lapho usuka khona.
Into yokugcina udokotela wesikhumba ayichaza ngokhilimu, futhi abasebenzise njengesinqumo sokugcina lapho zonke izinketho ezikhona sezizamile ukuqeda izinduna zamanje nokubonakala kokuningi. Kunconywa nnoma unake amaqhinga amaningi enziwe asakazwa ku-inthanethi, okunye okungaba yingozi kwazise inhloso ukuzama ukomisa okusanhlamvu ngokushesha okukhulu ukuze ipore ivalwe. Ngokumisa ngokushesha induna, izoshiya amamaki esikhunjeni, angaba yimbala yabangaphezu koyedwa.
Ngokuya ngohlobo nenani lezinduna esinalo emhlane wethu, indlela yokuziqeda ingaba yinde noma incane, inqobo nje uma sizilalela zonke izincomo esikukhombisile ngenhla futhi kufana ncamashi nodokotela wesikhumba abazokunikeza yona.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ingabe unezinduna emhlane wakho?
Muva nje ngikhethe ukusebenzisa into yokugcoba insipho enginayo ebusweni bami nasemhlane wami ongaphezulu. Ngiyigcoba ngenkathi ngigeza nalapho ngiphuma, ngemuva kokuthambisa (ngoba ishiya isikhumba sakho simanzi), ngigcoba ukhilimu wezinduna ezithile ezinconywe udokotela wesikhumba.
Mano de santo hey, evikini ngihambile sengibuyiselwe ngokugcwele izinduna ezimbalwa ezomile.
Yimuphi umkhiqizo owusebenzisela ukuhlanza kanye nama-granite athile?
Sawubona, igama lami nginguBrian. Ngineminyaka engu-16 ubudala. Nginezinduna eziningi emhlane wami, kodwa okunye enginakho ngama-blackheads. Bengizama ukuwakhipha ngokungidlulisa ijeli yotshwala ngemuva kokugeza, kube njalo ????
christian noriega maldonado kusho
Iya kudokotela wesikhumba ukuze akunikeze ukwelashwa okufanele.
azikho izikhala ezibushelelezi emhlane wami: S !! Konke kugcwele izinduna futhi kuyangikhathaza ... futhi ngazama ukuwaqeda ngokhilimu omncane ... kepha noma kunjalo - kufanele ngibonane nodokotela wesikhumba?
Kuyahlekisa ngoba iviki engisebenza ngalo kakhulu, indawo engemuva ikhombisa iLOT ngoba ngithola ama-granazas ambalwa a-pa'que, afana ngokushesha, nalawo wezingubo zokwenziwa mhlawumbe ngiyehluleka! ngiyabonga ngeposi.
Ngineminyaka engama-34 ubudala futhi angikaze ngibe nezinduna emhlane nasemahlombe. konke kuqale kuleli hlobo. Ngenza imidlalo yokujuluka (bengihlala ngikwenza) ngigqoka amahembe aphefumulayo kepha lokhu kuya kokuningi. Akuzona izinhlamvu ezincane ezijwayelekile, zinonile futhi zinkulu, ngidinga isixazululo ngiyababa
sawubona iqiniso nginezinduna emhlane wami kodwa ngisebenzisa amaphilisi e-asepxia dis ukuthi ngokwelashwa kwezinduna ngiyethemba kuyasebenza kepha usacabanga ukuthi udinga ukubona udokotela wesikhumba?
Bengingenazo izinduna emhlane wami, kepha sengiqale ukuba nobudlelwano futhi manje senginazo, zimbalwa kepha nginazo !!! kufanele kungenxa yalokho ???
Akukona ukuba nobuhlobo ami tmb kwenzeke kimi, kufanele ngikubeke futhi lezo zinduna ziyahamba
Sawubona, ngineminyaka engama-23 ubudala, nginezinduna eziningi emhlane, bathi angisebenzise insipho ebizwa ngokuthi i-lactibon nokhilimu obizwa nge-topcream, kodwa akubasusi ngokuphelele.
Sawubona, ngineminyaka engu-12 ubudala, nginezinduna emhlane futhi manje sengishwabene ekhishini. Ngokuqondene nomdlalo, ngenza i-basketball futhi njengoba ngikhumbula ukuthi bengiphefumula kakhulu, ngihlushwa i-chlorine kodwa ngibe nezinhlamvu zeminyaka engaba ngu-0 noma engu-5 kungenza ngiphelelwe yithemba futhi banginikeza amabhokisi omngcwabo bese ngopha usizo oluningi
sawubona nginezinduna eziningi emhlane ngineminyaka engama-20 ubudala
Sawubona, ngingamaMeneses eCrisbelt, cishe iminyaka emibili, ngibe nezinduna ezinkulu, ezimnyama emhlane wami, angazi ukuthi ngenzeni, zibukeka zingabukeki.
Amabhati ngamanzi ashisayo alungile.
Usuku lukaKhisimusi: Ungakuthola kanjani ukubukeka okungajwayelekile futhi okunesizotha